UMiley Cyrus ususa ikhasi lakhe le-Twitter - leGuy. Ingabe Nawe Ungenza Okufanayo? - Ucansi-Uthando-Impilo
UMiley Cyrus ususa ikhasi lakhe le-Twitter - leGuy. Ingabe Nawe Ungenza Okufanayo?
O, Miley! Ithi akunjalo. Intandokazi yethu yentsha esiyithandayo iye yabikwa ususe i-akhawunti yakhe ye-Twitter esetshenziswa kakhulu ngoba amahemuhemu akhe i-BF amcele!
Nge-Tweet yakhe yokugcina, uMiley ubhale wathi, 'I-FYI Liam ayinayo i-twitter futhi ifuna Mina ngisuse eyami ngesizathu esizwakalayo.'
Okushiwo ngenhla 'Liam' kungaba U-Liam Hemsworth , u-Australia onobuqili ahlangana naye ngenkathi eqopha ifilimu Ingoma Yokugcina .
isomisi esihle kakhulu sezinwele ezijiyile
UNIVERSAL CITY, CA - MAY 31: Umculi / umlingisi uMiley Cyrus ufika kuma-18th Annual MTV Movie Awards abanjelwe eGibson Amphitheatre ngoMeyi 31, 2009 e-Universal City, eCalifornia. (Isithombe sikaJason Merritt / Getty Images)
__Bheka isitayela sikaMiley! __
Ukukhuluma iqiniso, u-Liam unothando olukhulu ngokwedlulele, ngakho-ke ngithola ngokuphelele isilingo sokunikela ngokuthile ngaye. Kepha, kufanele ngithi, angicabangi ukuthi kufanele sibe yinx noma yini esiyithandayo kumfana. Futhi ukwahlulela ngezibuyekezo zikaMiley ezingapheli ze-Twitter — nabalandeli abangaphezu kwezigidi ezi-2 — wayekuthanda ngempela!
Mhlawumbe wayengafuni ukuthi enze iTwitter mayelana * nempilo yabo yothando? *
Ngesinye isikhathi, umfana othile wangicela ukuba ngiyeke ukudlala i-hockey ngoba wathi ingase iphazamise 'ubuso bami obuhle.' Ngamtshela ukuthi ngizomosha okwakhe ubuso obuhle uma eke wangicela ukuthi ngiphinde ngikhethe phakathi kwakhe nezemidlalo. Wake waba sesimweni esifanayo?
Yini indoda ebifuna uyinqume empilweni yakho? Ngabe ukwenzile? Ingabe kwenze ubudlelwano bakho baba ngcono ... noma ubumunyu nje?
izinwele ezimnyama nezinwele zokuluka
Izindlela Ezengeziwe Zokuthola Ubuhle
Ungawina u- $ 50,000 ngokubhalisela noma ukungena ngemvume ku-Glamour.com!
umbala wezinwele owile kanye nezitayela
Bhalisela Izeluleko Zesitayela SikaGlamour.com seViki Nethiphu yobuhle bezincwadi zezindaba zosuku!
Faka i-Glamour ekhasini lakho eliyisiqalo le-iGoogle .
Landela ubukhazikhazi ku-Twitter .
UHilarie Burton Ukhumbula Isimo Sobulili Esinye Somuthi Esamshiya Ekhala E-trailer Yakhe
Ungayibeka kanjani i-wardrobe entsha sha yekwindla nobusika: Ijazi elingenamikhono
Usizo! Ufuna Ukugcina Kungavamile
Izitayela Zemfashini Ezigqoke Kakhulu Zika-Spring 2012
I-Dos & Don'ts of Fall 2012 Fashion Trends
ama-shampoo anombala onsomi wezinwele ezihlungiwe
amasudi okugeza aphezulu okhalweni 2016
kungani abafana bethula lapho bekuthanda